Ngubani owafaka i-Escalator?
Indlela umthumeli weso sixhobo sokuthutha owenziwe ngayo
I-escalator yindlela yokuthutha isithuthi eshukumisa abantu. Yisitepsi eshukumayo kunye namanyathelo ahambayo okanye ahlayo usebenzisa ibhanti yokuthutha kunye neengoma, ukugcina isiteyathelo ngasinye esingqongqo kumgibeli.
Nangona kunjalo, i-escalator yaqala njengendlela yokuzonwabisa ngaphandle kweendlela eziphathekayo zothutho. I- patent yokuqala enxulumene nomatshini ofana ne-escalator yanikezelwa ngo-1859 ukuya eMassachusetts indoda yeyunithi eyayiqhutywa yintambo.
Ngo-Matshi 15, 1892, u-Jesse Reno watyhubela izitebhisi zakhe ezihambahambayo okanye i-elevator esityebileyo, njengoko wayibiza. Ngomnyaka we-1895, uReno wadala uhambo olutsha olutsha olusesikweni eConey Island kwi-design yakhe esemthethweni. Kwakuyizitebhisi ezihambayo ezaphakamisa abagibeli kwibhanti yokuthutha kwi-angle-degree.
Hlangana ne-Scala Elevator
I-escalator njengoko siyazi ukuba yabuye yaveliswa kwakhona nguCharles Seeberger ngo-1897. Wadala igama elithi "escalator" kwigama elithi "scala," elithetha isiLatini ngamanyathelo kunye negama elithi " elevator ," esele lenziwe.
UCharles Seeberger wabambisana ne-Otis Elevator Inkampani ukuvelisa i-escalator yokuqala yezohwebo ngo-1899 kwi-factory yase-Otis e-Yonkers, NY Emva konyaka, i-esberator ye-wooden ye-Seeberger-Otis yazuza umvuzo wokuqala kwi-Paris Exposition Universelle eFransi. Okwangoku, impumelelo yeReno yaseConey Island yamphumelela ngokusenza uYese Reno ibe ngumqambi ophezulu we-escalator kwaye waqala ukuqala inkampani ye-Reno Electric Stairways ne-Conveyors ngo-1902.
UCharles Seeberger wathengisa amalungelo akhe amalungelo e-patent kwi-Otis Elevator Inkampani ngowe-1910. Inkampani leyo yathengisa ne-Reno ye-escalator patent ngo-1911. I-Otis yayiza kuqhuba ukuveliswa kwemveliso ye-escalator ngokudibanisa nokuphucula iindlela ezahlukeneyo zokuqulunqa.
Ngokuka-Otis: "Ngama-1920, iinjongo ze-Otis, ezikhokelwa nguDavid Lindquist, zidibanise kwaye zaphucula i-Jesse Reno kunye noCharles Seeberger izakhiwo ze-escalator kwaye zenze amanyathelo acacileyo, amanyathelo e-escalator yanamhlanje asetyenziswayo. I-escalator yegama lahlekelwa yindawo yayo yokuthengisa kunye nenkunzi yayo "e" ngowe-1950 xa i-US Patent Office yalawula ukuba igama elithi "escalator" liye libe lixesha eliqhelekileyo elichazayo lokunyuka kwamagceke. "
Escalators Yiya kwihlabathi
I-Escalators isetyenziswe ngeenxa zonke kwihlabathi ukuhambisa izithuthi ezihambahambayo kwiindawo apho iinqwelo eziza kuba zingenakwenzeka. Zisetyenziselwa kwiivenkile zesebe, iindawo zokuthengisa, ii-airports, iinkqubo zokuhamba, iindibano zendibano, iihotele, ii-atnas, ii-stadium, izitishi zezithuthi ( ezantsi ) kunye nezakhiwo zikawonkewonke.
I-Escalators iyakwazi ukuhambisa inani elikhulu labantu kwaye iyakwazi ukufakwa kwisithuba esifanayo nesiteyithi. Ngokuqhelekileyo akumele ulinde i-escalator kwaye banokukhokela abantu ekuphumeni okuphambili okanye imiboniso ekhethekileyo.
Khuselo lwe Escalator
Ukhuseleko luyinkxalabo enkulu kwi-design escalator. Ngokomzekelo, izinto ezithile zokugqoka zingangena kwi-escalator. Kukho umngcipheko wokulimala kweenyawo kubantwana abathwele iintlobo ezithile zeesanti.
Ukukhuselwa komlilo we-escalator kunokubonelelwa ngokufaka ngokuzenzekelayo ukutshiswa komlilo kunye neenkqubo zokunciphisa ngaphakathi kweqoqo lokuqokelela uthuli kunye nomgodi weenjini. Oku kungaphezulu kwiphina inkqubo yokufafaza ngamanzi efakwe kwisilwanyana.
Yule Iresail Recipe kunye neMbali
Ukufundisa Umxholo / Umxholo oPhathekayo